JAAL MO’IIBOON:- “uummatni Oromoo Qawwee bitatee qabsoo hidhannoon of kabachiisuuf hojjechuu qaba”. – AMBO TV
Lixa Oromiyaa keessatti torban darbe keessa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa WBO’n tohachuu isaa gabaafamaa ture. Tohannaa WBO kan aanaa Saasiggaa ilaalchisuun Raadiyoon Arrata Biyyoolessa Oromiyaa-ABO turtii ajajaa WBO humna furgaatuu onichaa Mo’iiboon Tufaa waliin taasisee jira.
Haala injifannoo aanaa Saasiggaa qabachuu fi kaan irratti Mo’iiboon turtii taasiseen dubbatee jira. “ABO’n erga qabsoo karaa nagaa jechuun biyya galee hogganootii isaa hedduun booji’amaniiru” yaada jedhu kan kennu, ajajaan WBO humna Furgaatuu kun, duula Lolaa jabaa amma WBO’n gaggeessaa jiru qorannaa hedduun booda itti seenamuu himeera.
“Duula waraanaa utuu hin eegalin injifatta” jechuun kan dubbateen akkaataa milkaa’uu danda’u irratti WBO’n marii dheeraa gaggeessuun duula waraanaa bobbaa maqaa hogganoota WBO gameeyyii kanaan dura wareegamaniin eegale jiru kanaan Bilisummaatti akka uummata geessu dubbateera.
Lola Lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ilaalchisees yaada kenneen, “hidhamaa siyaasaa namoota dhibbaaf shantama (150) ta’an mana hiraarsaa irraa hiiksisuu dandeenyee jirra” jedha ajajaan humna Furgaatuu Urjii lolaa Moo’iiboon. Akkasuma waajjiraalee mootummaa aana san keessaa irratti tarkaanfii keessa deebi hin qabne fudhachuun barbadeessuu himeera.
Aanaan Saasiggaa humna WBO’n akka qabamtuuf qabsoo guddaa gaggeeffamaa tureen booda milkaa’ina addaa argachuu kan himu ajajaan kun, injifannoo kana keessaa qoodni uummata Oromoo guddaa akka ta’es eeree jira.
“Qabsoo gaggeessaa jirru keessatti uummatni keenya nu cina dhaabbataa jira. Nyaataaf dhugaatii nuu kennuu akkasuma tumsa irraa eegamuun uummatni nuu taasisuun lolaa jirra” kan jedhu Mo’iiboon, tumsi uummata Oromoo milkaa’ina isaaniif murteessaa akka ta’e dubbateera.
Wallagga bahaa Aanaa Saasiggaa bulchiinsa magaalaa Balii, Bareeda, Gabaa Jimaataa kan jedhaman akka WBO’n tohataman haasaa Arrata waliin galgala har’aa taasifameen ajajaan humna furgaaruu WBO Urjii Lolaa Mo’iiboon himee jira.
Qaamoleen mootummaa waraanaan injifataman karaa shiraa WBO injifachuuf humna waraanaa WBO fakkeessanii namoota rifeensa dheedheereffatan fakkeessuun Wiiggii itti hidhanii bosonatti bobbaasuus kan eere Mo’iiboon, sana irra aanuuf uummata Oromoo waliin qabsoo godhamuun akka irra aanamu himeera.
Dhuma irrattis uummatni Oromoo Qawwee bitatee qabsoo hidhannoon of kabachiisuuf akka hojjechuu qabu dhaamee jira.
Previous PostDhalattoonni Tigraay biyya Alaa jiraatan Hiriira Geggeessan
Next PostDhaabbileen siivilii 24 dhukaasi akka dhaabbatu, mariin akka gaggeeffamu gaafatan